Ukubaluleka kokuqukethwe ku-SEO: Isiqondisi Esinemininingwane NguSemalt
Ukudala kanjani okuqukethwe okwenzelwe izinjini zokucinga
Amawebhusayithi amaningi afisa ukufakwa kuhlu phakathi kwamasayithi weGoogle TOP 100. Iningi lalawa mawebhusayithi lenza umzamo wokwandisa amawebhusayithi abo ngezinjini zokucinga. Inani elincane kakhulu labo likuqonda ngokweqiniso ukubaluleka kokuqukethwe ku-SEO.
Ngokwezikhundla ezisezingeni eliphezulu lemibuzo yokusesha, okuqukethwe kwewebhusayithi yakho kungafaniswa nenjini yemoto yakho. Imoto yakho ngeke ihambise intshi ngaphandle kwenjini, nayo iwebhusayithi yakho ngeke ihambele phambili ngaphandle kokuqukethwe okuhle.
Lapho okuqukethwe kwakho kusezingeni eliphezulu futhi amanye amasu akho e-SEO esezingeni eliphakeme, kungasiphi isikhathi, iwebhusayithi yakho izoba sezingeni eliphezulu lezinjini zokucinga. Okumele kubuye kwenzeke uma okuqukethwe kwakho namasu we-SEO emabi - kungaholela ezinhlawulweni ezivela ku-Google. Uma iwebhusayithi isithole isigwebo seGoogle, imvamisa bakuthola kunzima kakhulu ukuyilulama.
ISemalt ihlose ukukusiza uqonde ukubaluleka kokuqukethwe ku-SEO, yikuphi okuqukethwe okuyikho ngempela, ukuthi ukwakhe kanjani okuqukethwe okwenziwe kahle futhi konke ongakwenza ukuze uqiniseke ukuthi okuqukethwe kwakho namasu we-SEO asebenza ngokubambisana ukukunikeza indawo phezulu kosesho. imibuzo yenjini.
Ake sihlole umhlaba wokuqukethwe kanye ne-SEO.
Ezingeni eliyisisekelo, okuqukethwe kumane kungolwazi lwedijithali (umbhalo, isithombe, ividiyo, umsindo) kuwebhusayithi yakho okuhloswe ngayo ukukhanyisa, ukujabulisa noma ukwazisa izivakashi zakho.
Kubaluleke kangakanani okuqukethwe kwi-SEO?
Imibuzo engaphezulu kwezigidigidi ezi-3.5 yenziwa nsuku zonke kuGoogle. Emzameni wokugcina abasebenzisi babo, iGoogle igcina ibuyekeza ama-algorithms wayo ukuze iqinisekise ukuthi iletha "imiphumela ewusizo nefanele" ngesikhathi esifushane kakhulu.
Imiphumela ewusizo futhi efanele kulo mongo ingukuqukethwe kwamawebhusayithi kuyo yonke i-intanethi. Ngemuva kwalokho zibalwa ngokulandelana kokusebenziseka nokuhambelana nomsebenzisi owenza usesho.
Lokhu kukhombisa ukuthi okuqukethwe kwakho kufanele kuthathwe njengokuwusizo yi-Google kumsebenzisi ngaphambi kokuthi kubalwe.
Ukuze ukhuphule amandla enani le-SEO lokuqukethwe kwakho, kunezici ezithile okuqukethwe kwakho okufanele zibe nakho. Kubandakanya:
1. Kufanele kube wusizo futhi kufundise: Uma ungumnikazi webhizinisi lakho, kufanele ufake indawo, imininingwane yokuxhumana, imikhiqizo / izinsizakalo ezinikezwayo, kanye namahora wokusebenza. Uma ukwazi, engeza ibhulogi ukugcina amakhasimende akho evuselelwa kwakamuva mayelana nebhizinisi lakho.
2. Kufanele kube kunokubaluleka okuningi futhi kube lusizo ukwedlula amanye amawebhusayithi ku-niche efanayo: Uma ubhala ngokuzisiza, ngokwesibonelo, qiniseka ukuthi ama-athikili akho anikela ngemininingwane engcono noma umbono ohlukile wokuzisiza kunamamiliyoni amaningi izindatshana zazikhipha nsuku zonke kusihloko esifanayo.
3. Kufanele kube nokukholeka : Ukwethenjwa kwesiza sakho kungakhuphulwa uma usebenzisa ucwaningo lwangempela, izikhombo nezixhumanisi zokuqukethwe kwesayithi lakho. I-biography yomlobi, ukubuyekezwa, nobufakazi obuvela kumakhasimende eqiniso langempela kuzothuthukisa kakhulu ukuthembeka kwakho.
4. Kufanele ibe sezingeni eliphezulu: Qinisekisa ukuthi okuqukethwe kusayithi lakho kwehlukile, kuqonde iphuzu nekhwalithi ephezulu. Gwema ukubumbana ngandlela zonke.
5. Kufanele kube nokuzibandakanya: Yenza iwebhusayithi yakho iphile ngokungeza izithombe namavidiyo asezingeni elifanele. Ungavumeli izivakashi zakho ziphazanyiswe isipelingi, amaphutha wokuqina noma weqiniso. Vikela izikhangiso eziningi kakhulu. Gcina izivakashi zakho zibandakanyekile ngokuzivuselela njalo. Ungawagcina kusayithi lakho isikhathi eside ngamabhokisi wokuphawula kanye / noma amawijethi emidiya womphakathi.
Ungakwakha Kanjani Okuqukethwe Okulungiselelwe Izinjini Zokucinga
Ukuze udale okuqukethwe okulungiselelwe, kunezinyathelo ezimbalwa okufanele zilandelwe.
Ngaphambi kokudala okuqukethwe
1. Yenza ucwaningo lwegama elingukhiye: Ngemiphumela emihle kakhulu, uzofuna ukuthola ukuthi yimaphi amagama angukhiye aseshwa kakhulu yizithameli zakho ozifisayo. Ithuluzi lokucabanga elingukhiye elithembeke kakhulu elifana nelethwa yiSemalt lizoba usizo olukhulu ekwenzeni lokhu.
2. Khetha isihloko sakho namagama asemqoka asisekelayo: Kubalulekile ukwenza ucwaningo lwegama elingukhiye kuqala ukuze okuqukethwe kwakho okutholakele kutholakale ezinjini zokucinga. Kucwaningo lwakho, thola isihloko esifanele okuqukethwe kwakho. Qinisekisa ukuthi ugxila kumagama angukhiye omude. Futhi, gwema amagama angukhiye ancintisanayo ngenombolo enkulu yokusesha.
3. Lungiselela uhlaka lwakho nefomethi yokuqukethwe ukuze ifundeke kalula: Iziza eziningi zilwela ukunakwa kwazo zonke izivakashi onazo kuwebhusayithi yakho. Ngakho-ke kufanele wenze konke okusemandleni ukuze uzigcine zingene kokuqukethwe kwakho. Enye indlela yokwenza lokhu ukufometha okuqukethwe kwakho ukuze kufundeke kalula.
Ngezansi kunamanye amathiphu angaba wusizo kuwe:
a . Hlukanisa okuqukethwe kwakho emigodini emincane. Izigaba ezinkulu zithusa izivakashi eziningi. Kuhle ukusebenzisa cishe imisho emi-2 isigaba ngasinye.
b . Ngokusemandleni akho, faka izihlokwana kanye / noma izithombe ngemuva kwawo wonke amagama angama-200 ukuya kwangama-200 ukuqhubekisa phambili ukuhlukanisa okuqukethwe kwakho.
4. Faka ama-backlinks kokuqukethwe kwakho: Lapho isayithi lakho linokwetheneka ngokwengeziwe, liyanda kakhulu. Uma uxhuma amanye amagama kuwebhusayithi efanele futhi enegunya, izinjini zokusesha zibona ukuthi okuqukethwe kwakho kuyathembeka. Ngemiphumela emihle kakhulu, khawulela amagama kusixhumanisi sakho ukuze abe ngu-6 noma ngaphansi.
5. Namathela esihlokweni sakho nakwigama eliyisihluthulelo: Uma ufuna ukudala okuqukethwe okuwusizo kakhulu nokufanele esihlokweni sakho, kubaluleke kakhulu ukuthi unamathele esihlokweni sakho. Futhi ungazami ukuqondisa amagama amaningi okhiye. Qiniseka ukuthi ugxila esihlokweni sakho namagama asemqoka asisekelayo.
Ngemuva kokudala okuqukethwe kwakho
1. Lungiselela i-URL yakho: Yikheli lekhasi lakho le-web elibekwe ngqo phezulu komphumela wokusesha. Indlela i-URL yakho eyenziwe ngayo inganquma isilinganiso sakho sokuchofoza. Uma i-URL yakho yinde kakhulu noma ibukeka ingaqondakali, ingahle ithuse abasebenzisi bokusesha ngokuchofoza kuwebhusayithi yakho. Kubalulekile ukuthi i-URL yakho ifundeke njengoba amazinga wokuchofoza ngokuqondile athinta isikhundla sakho.
2. Lungiselela ithegi yesihloko sakho: Ithegi yesihloko yisihloko esingachofozekayo esibonwa ngokuqondile ngezansi kwe-URL. Ikhwalithi yethegi yakho yesihloko ingenza umsebenzisi afune ukuchofoza kusayithi lakho noma anganaki. Amathegi esihloko asiza nezinjini zokucinga ukuthi ziqonde ukuthi yini ikhasi lakho lewebhu.
Nawa amanye amathiphu angakusiza wenze kahle ithegi yakho yesihloko:
a. Vumela ithegi yesihloko ichaze ngokuqondile lokho okuqukethwe yilelo khasi.
b. Ithegi yesihloko kufanele ibe nezinhlamvu ezingama-60 noma ngaphansi.
c. Beka amagama akho angukhiye ekuqaleni.
d. Zama ukungafaki amagama angukhiye amaningi kusihloko.
3. Lungiselela incazelo yakho ye-meta: Incazelo ye-meta ihlumela elifushane lombhalo kusuka ekhasini lakho elivela ngaphansi kwe-URL nethegi yesihloko. Okuqukethwe okuncane okubonwe encazelweni yakho ye-meta nakho kuthinta isilinganiso sakho sokuchofoza-ke lokho okubonwa lapho ngabasebenzisi kuzonquma ukuthi bazokuchofoza yini esizeni sakho noma baqhubeke nokunyakaza. Nawa amanye amathiphu angasiza ukwengeza incazelo yakho ye-meta:
a. Qinisekisa ukuthi incazelo ye-meta iwukufingqwa okufushane nokucacisiwe okujwayelekile kokuqukethwe okusemqoka.
b. Qiniseka ukuthi incazelo ye-meta iqukethe izinhlamvu ezingaphansi kuka-160.
c. Beka amagama agqamile efanelekile encazelweni ye-meta (azoqokonyiswa emiphumeleni yokucinga).
Ungasiza Kanjani uSemalt
Lokhu konke kungazwakala kubuchwepheshe futhi kungahle kubonakale kungumsebenzi omkhulu. Kungaleso sizathu uSemalt edala uhlelo oluzenzakalelayo lwebhizinisi lakho. Umongo wokwenza okuqukethwe okuhle okokuqala ngqa ukuthuthukisa izinga lakho ezinjini zokucinga ezizoholela empumelelweni yebhizinisi lakho.
USemalt ukhipha ukucindezeleka futhi enze ibhizinisi lakho online liphumelele.
Banikezela ngemikhiqizo nezinsizakalo ezinhle kakhulu zokuqinisekisa amakhasi akho wewebhu kakhulu. Lokhu kufaka phakathi:
1. I-AutoSEO: I- AutoSEO ye-Semalt ithembisa imiphumela emihle ngaphakathi kwamagama amafushane. Le phakheji ye-SEO iletha: ukuthuthukiswa kokubonakala kwewebhusayithi; ukwenziwa kwekhasi isakhiwo sesixhumanisi; ucwaningo lwegama elingukhiye; nemibiko yokuhlaziywa kwewebhu. Chofoza lapha ukuze uqalise.
2. I-SEO Egcwele: Lokhu kufaka iqoqo elithuthukile lamasu we-SEO enzelwe umphumela ongcono kakhulu. I-SEO egcwele kaSemalt iyakhulula: ukwenziwa kwangaphakathi; ukulungisa iphutha le-webhusayithi; ukubhala okuqukethwe; abahola imali ukwesekwa kanye nokubonisana. Thatha ithuba le-Semalt's Full SEO lapha .
3. Ama-analytics eWebhu: Amathuluzi wokuhlaziya wewebhu we-Semalt aveza indlela emfushane kakhulu ku-Google TOP10. Lawa mathuluzi asiza ukuhlola amazinga akho wewebhusayithi; kwembula ukubonakala kwesiza sakho ku-inthanethi; hlola amawebhusayithi ancintisanayo; bona amaphutha okusebenziseka ekhasini; futhi ulethe imibiko ephelele yewebhusayithi kuwe. Ungathola imibiko yakho ye- web analytics yamahhala manje.
4. Ukuthuthukiswa kweWebhu: Ukuvela kuqala kubalulekile ku-inthanethi kanye nasezimweni zangempela. Isithombe esithandekayo sisiza ukuthola abathengi abaningi. I-Semalt iqinisekisa ukuthi iwebhusayithi yakho iyathandeka kakhulu futhi iyasebenziseka kumakhasimende akho. Abathuthukisi bewebhu bochwepheshe beSemalt bahlinzeka: idizayini yewebhu ekhangayo futhi esebenzayo; izixazululo zokuphathwa kokuqukethwe; ukubonakala okwandayo; ukuhlanganiswa kwe-plugin okubushelelezi ne-API; Ukuhweba ngomnotho kuqinisa; ukwesekwa kanye nokugcinwa.
5. Ukukhiqizwa kwevidiyo: Ama- Asides aletha okuqukethwe okubhaliwe kwe-topnotch kumakhasimende awo, uSemalt futhi wenza okuqukethwe kwevidiyo okuhle kakhulu ukugcina kukude ngaphambi komncintiswano.
Okuqukethwe yikosi ekusetshenzisweni kwezinjini zokucinga. Okuqukethwe kwakho kunamandla okwenza ibhizinisi lakho noma ukuphule. Ngokuqonda okuqoqwe lapha, ungakha ngempumelelo okuqukethwe okubandakanyekayo noma okungcono, ukushiye ezandleni ezinhle kakhulu zebhizinisi le-SEO - Semalt.